जनतासँग गरेको बाचा पुरा गर्दै पूर्वमन्त्री पण्डित, विभिन्न योजनाका लागि करोडौँ बजेट बिनियोजन - News Birat
विराटनगर, माघ २४–निर्वाचीत बनेदेखिनै जनता माझ गरेका प्रतिवद्धता पुरा गर्न लागि परेका पूर्व संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री तथा मोरङ क्षेत्र नं. ६ का संघिय सांसद लालबाबु पण्डितको पहलमा विभिन्न योजनामा करोडौँ रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
रानी–नेमुवा–मनमोहनचोक–सडकका लागि २० करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको छ । पण्डितको पहलमा संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिफिारिसमा ग्रामिण सडक सञ्जाल बहुवषिय आयोजनाका अन्तर्गत अर्थमन्त्रालयले २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो ।
त्यसैगरी पण्डितकै पहलमा टंकि खानेपानि आयोजनाका लागि ४५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको छ । बुढीगंगा गाउँपालिकाका सवै वडामा शुद्ध पानि वितरण र खानेपानि समस्या समाधानका लागि पण्डितले पहल गरेका हुन् ।
खानेपानि तथा सरसफाईको सहलगानी आयोजना मार्फत ४५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भएकोमा चालु आर्थिक वर्षका लागि मात्र २९ करोड २७ लाख खर्च गर्ने बजेट स्वीकृत भएको छ । उक्त योजना सम्पन्न भएपछी पण्डितको निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत बुढिगंगा गाउँपालिकामा शुद्ध पिउने पानिको समस्या समाधान हुने भएपछी स्थानीय उत्साहित भएका छन् ।
गृह जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा सवैभन्दा धेरै पुग्ने ‘भिआइपी’ का रुपमा चिनिएका पूर्वमन्त्री तथा मोरङ क्षेत्र नं. ६ का प्रतिनिधिसभा सदस्य पण्डित केही दिन अघि मात्र विराटनगर आइ विभिन्न कार्यक्रममा सहभागि भएर पुनः काठमाडौं फर्किएका छन् ।
गत माघ १९ गते मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नं. ६ अन्तर्गत शुन्दरहरैँचा नगरपालिका–५ स्थित हसिना सिमसारमा आयोजित ‘भ्रमण वर्ष २०२० तथा विश्व सिमसार दिवस’ मा सहभागिता जनाए । उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराइले गरे । त्यसैगरी सोही निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत २० गते बुढीगंगा गाउँपालिका–२ अमाहिका जनतासँग भेटघाट तथा विकास निर्माणका विषयमा छलफलसमेत गरेका छन् ।
त्यस्तै पण्डित मन्त्री भएकै बेला तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत सुरु भएको र हाल निर्माण कार्य तिब्र गतिमा अघि बढीरहेको पुष्पलाचोक गछिया सडकको निरिक्षण तथा अनुगमन गरेका छन् । उनले सुनसरीको मोरङ अमाहि र सुनसरीको सितापुर सिसोक टोल जोड्ने बुढिखोलाको पुल निर्माणका लागि स्थानीयले माग गरेको योजनाका लागि निरिक्षण गरि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । निरिक्षणका क्रममा पण्डितसँग स्थानीय जनताले पुल नहुँदा सास्ती खेप्दै आउनु परेको गुनासो गरेका थिए ।
यस वाहेक गृह जिल्लामा अगुवा कार्यकर्ता भेटघाट, मन्त्री छँदा सुरु गरेका, र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाको अनुगमन र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताको समस्या र पीरमर्का बुझेर पण्डित पुनः काठमाडौं फर्किएको नेकपा प्रदेश कमिटी सदस्य चौधरीले बताए ।
शुक्रबार, २४ माघ २०७६, २३:२८ February 7, 2020 मा प्रकाशित